Tag Archives: Ugandha
Waxaa sheegayaa in ciidamada shisheeye gaari dagaal looga gubay inta u dhaxaysa Ceel-wareegow iyo Buufow oo ka tirsan gobolka Sh/hoose.
Ciidan ka tirsan XSHM ayaa weerar dhabba gal ah”KAMIIN” u dhigay kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye taasoo sababtay gubashada gaariga.
Wararka ayaa sheegaya in gaariga noociisu yahay Taw isla markaana ku dhacday jug culus kadibna uu bas belay.
Weerarada noocan ah ayaa joogta ka ah jidkaas dheer oo dhibkiisa leh,waana sii abdanaya dhibka gaaraya kuwa soo duulay oo ku dhiig baxaya gayiga Somaliyeed.
Wixii soo kordha waan soo gudbineynaa insha’allaah.
XOGTA WARKA HARAR24.COM